हंगकंगमा उपेन्द्रको कविता र अन्तक्रिया – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
७ आश्विन २०७७, बुधबार ०४:०२ English
हंगकंगमा उपेन्द्रको कविता र अन्तक्रिया
हंगकंग । “छोराको कुरा नपत्याएर भन्दा पनि एउटी राम्री केटी देखेर मलाई बोल्न मन लागिहाल्यो । मैले उसलाई भनिहाले ‘ओइ नानी, तिम्रो पेटीकोट के साह्रो पातलो ? के लगाको त्यस्तो ?”
नेपाली गाउँ घरको जनजिब्रोमा झुन्डिएका शब्द अनि परिवेशलाई साहित्यमा मिसाएर ब्यङ्ग्यसँगै मार्मिकता पस्कन खप्पिस साहित्यकार, लेखक, कवि उपेन्द्र सुब्बा गत आईतवार हङ्कङमा देखा परे । समिक्षक समाज हंगकंगको निमन्त्रणामा आएका उनले मनु कन्दङ्वाको कविता संग्रह ‘बलिहाङतङनाम’ (मेरो मानसपटलमा) विमोचन सँगै आफ्ना उत्कृष्ट श्रृजना पनि सुनाउँन भ्याए । याउ मा तेई स्थित फ्रेन्डसीप क्लवमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित हङ्कङेली दर्शकहरुले सुब्बाको कविता र नेपाली साहित्य सम्वन्धि अन्तक्रिया पनि गरेका थिए ।
उनै उपेन्द्र सुब्बा जसको पहिलो कथा संग्रह ‘लाटो पहाड’ले यस बर्षको ‘पद्मश्री पुरस्कार’ प्राप्त गरेको छ । उनको लेखकीय क्षमता सिनेमामा पनि देखिई सकेको छ । उनले ‘कबड्डी’ सिनेमाबाट उत्कृष्ट स्क्रिप्टको राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरे । जसको सिक्वेल ‘कबड्डी कबड्डी’को सफलताले त नेपाली सिनेजगतमा उनलाई अझ बलियो सम्भावना दिलाएको छ ।
२९ चैत्र २०७२, सोमबार २१:३९ मा प्रकाशित